Darbiyada Garoowe oo saaka iyo shalay-ba lagu qoray DOONI MAYNO “AARANJAAN”
GAROOWE(P-TIMES)- Wariyaha PuntlandTimes ee magaalada Garoowe ayaa soo sheegaya in 24 saac ee lasoo dhaafay darbiyada dhismayaasha magaalada lagu qoray hal ku dhagyo ay qoreen dad aan la aqoon xili habeen ah oo ay ku muujinayaan sida aysan u dooneyn kooxda inta badan hadda indhaha shacabka Puntland ay hayaan ee AARANJAAN.
Kooxdan, waxaa la rumeysan yahay in ay ku jiraan Ganacsato, Siyaasiin, Wasiiro iyo xubno kale oo firfircoon, waxaana inta badan la sheegaa in ay qeyb ka yihiin go`aaamada lagu maamulayo deegaanada Puntland.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa 26-kii bisha October daaha ka rogay in ay jiraan shaqsiyaad iskugu jira Ganacsato & Wasiiro oo sheeganaya dawladda in ay leeyihiin oo ay cid kasta ugu hanjabayaan xilalna ku balan-qaadayaan, kuwaas oo uu sheegay in ay tahay in meesha laga saaro.
Muujinta aragtidan in laga soo horjeedo kooxda loo bixiyey magaca AARANJAAN oo taariikhdooda siyaabo kala duwan loo sheego, haddana waxaa muuqata in sannadkii koowaad ay kasoo horjeesteen dadka Puntland.
Magacyada lagu qoray darbida marka laga tago, warar hoose ayaa sheegaya in ay kooxdan oo u abaabulan ah qaab kooxaysi siyaasadeed ah ay ciyaarayso, hadda talaabooyin dheeraad ah oo ku wajahan doorashada Gudoonka baarlamaanka Puntland.
Inta badan dadka lagu tirinayo in ay yihiin Danleyda isku xiran ee saaxiibka dhaw la ah Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, ayaan inta badan laga jecleyn gobalada deegaanadaas, waxayna badankood kasoo jeedaan gobalka Nugaal oo ay hadda arkeen shacabku, ayna muujinayaan ficiladooda.
Dad badan oo kooxdan siyaabo kala duwan wax uga sheegay ayay xireen laamaha Ammaanka, waxaana dad badan ay dib u xasuusteen mudo xileedkii Cabdiraxmaan Faroole oo sidan oo kale aragtida shaqsiga ah marar badan loogu xiray Wariyayaal, Siyaasiin iyo Odayaasha dhaqanka.